विराज र निकिताको लुक्स रिलिज, ‘साङ्लो’ डोटीमा विवाद ! - Glamorous Icon
Home›GIcon News›विराज र निकिताको लुक्स रिलिज, ‘साङ्लो’ डोटीमा विवाद !
नायक विराज भट्टको निर्माण तथा निर्देशनमा फिल्म ‘साङ्लो’ को यतिबेला डोटीमा छायाँकन भैरहेको छ । यस्तैमा छायाँकन स्थलबाट फिल्मको केही तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक तस्बिर विराज श्रीमान र पुर्व मिस नेपाल तथा फिल्मकी नायिका श्रीमतीको भेषमा छिन् । फिल्म युनिटका एक सदस्यले ‘साङ्लो’ को पहिलो लुक्स सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तैमा फिल्म ‘साङ्लो’ का लागि डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले बिकास निर्माणको लागि छुट्याइएको १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै यसको आलोचना पनि भैरहेको छ । जेठ २७ गते बसेको जोरायल गाउँपालिकाको बैठकले उक्त फिल्मलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
फिल्मले डोटीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने भएकाले ‘पर्यटन प्रवद्र्धन’को शिर्षकमा उक्त रकम चलचित्रलाई दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्‘हाम्रो ठाउँमा आएर चलचित्रको छायांकन भइरहेको छ । यहाँको सुन्दर ठाउँहरु चलचित्रमा देखाइएको छ ।